I-Semalt: Izizathu Ezinine Okwenza Izinkampani Zomsebenzi We-IT Kufanele ZineBlog
Kunezinkampani eziningi ze-IT ezijabulela ukuphumelela ezweni lebhizinisi,kodwa ngesizathu esithile, abambalwa kuphela abanalo ibhulogi kumawebhusayithi abo. Iningi le-ITizinkampani zenkampani zihambisana nezindlela zokuthengisa zendabuko noma zithola kunzima kakhulunokuchitha isikhathi ukuqhuba ibhulogi. Nokho, lezo zinkampani ezigijima inkampaniIbhulogi ekugcineni izovuna imivuzo yokwenza kanjalo. UJulia Vashneva, Impumelelo YomthengiImenenja ye Semalt Amasevisi Wezinhlelo Zedivayisi, ichaza ukuthi yiziphi izinzuzo eziqhuba ibhulokhi kuletha izinkampani zenkampani ye-IT.
Ukukhanyisa okuhlukile kwamasevisi
Ukukhangisa kokuqukethwe yingxenye ebalulekile yokuthuthukiswa kwebhizinisi emhlabeni jikelele.Amabhizinisi amaningi aya edijithali naselula, ngakho ukukhangisa kokuqukethwe sekube khonaokudingekile esizukulwaneni sokuhola kanye nokwahlukana - staccionata in plastica giardino. Ngesikhathi esifanayo, ukuhlukaniswakungaba yinkinga ethile ezinkampanini eziningi zezinkonzo ze-IT, njengoba zibhekana ne-amabhizinisi afanayo nsuku zonke. Uma udala ibhulogi, udala into ehlukile,into eyenza ukhiphe esixukwini. Ukusebenzisa, ungabonisa ubuntu bakho,ukuziphatha kwakho komsebenzi, umlingisi wenkampani yakho, njll, okuzosiza abathengi abazokhetha inkampani yakho phakathi kwabanye.
Izinkampani eziningi zesevisi ze-IT zivame ukuhlanganisana njengoba zisebenzisa igama elifanayo.Ngakho bangaqiniseka kanjani ukuthi ibhizinisi lakho lingcono kunezinye inkampani? Futhi kanjaniingabe iklayenti elizokwazi ukubona ukuthi ithimba lakho likwazi ngokwanele ukuthola umsebenzikwenziwe? Izinkampani eziningi ze-IT ngokuvamile zithembele emlonyeni womlomo noma ngokushaya okubandayoizinsizakalo, kodwa ibhulogi ethuthukisiwe ngokucabangayo ingavula ihluke ngokuphelele,indlela eyinkimbinkimbi yokuthola amakhasimende amasha.
Ukubonisa ulwazi kanye namakhono
Ikhasi elithi 'Mayelana Nathi' kunoma yiliphi iwebhusayithi yenkampani kubaluleke kakhulu lapho sikhangaamakhasimende amasha. Uma uthi umphathi wakho noma umholi uneminyaka eminingi kakhuluokuhlangenwe nakho, okufana nayo yonke inkampani, ngokusobala, kuyobonakala ibangele.Ngosizo lwebhulogi, ngokuphambene nalokho, ungabonisa isipiliyoni sakhokanye namakhono okuphatha, ukuze abhekisele kubathengi bakho abazoba khona. Kakhulukulula ukukwenza, kodwa okuthunyelwe kubhulogi kubonisa ukuthi yikuphi konke okufunayo okukukhuthazayo.
Ukukhuthaza Ibhizinisi Lakho
Ibhulogi izoba ipulatifomu enkulu yokuletha umphakathi wezinsizakalo ze-IT ndawonye.Uma nje ubhala kubhulogi lenkampani yakho, uqala ingxoxo, yiyiphiivulekele bobabili abaqeqeshiwe embonini namakhasimende. Impendulo oyitholayokuzokusiza ukuthuthukisa izinsizakalo zakho kubantu abahlukene. Uma uthola ilungelookuqukethwe kubhulogi yakho, kuzobeka inkampani yakho emephini.
Ukukhiqiza Ukuhola Okusha
Ucwaningo lwamuva lubonisa ukuthi izinkampani zeB2B eziqhuba ibhulogi zizokhiqiza kuze kube ngu-67% ngaphezulukuhola kunezinkampani ezingenayo, futhi izinkampani ze-B2C zinalo leli naningo-88% ngokufanele. Uma udala isu lakho lokukhangisa elingenayo,Ibhulogi yakho kufanele ihlale iyingxenye ebalulekile yayo. Eqinisweni, usebenzisa i-Search EngineAmasu wokusebenza (SEO) kumaposi ebhulogi asiza izinkampani ukuba zibe ngconoizikhundla. Ngaphandle kokuqukethwe okuhle okuhlobene nensimu, ngeke kwenzekeukufeza. Uma ulungisa ibhulogi yakho ngezinhloso ze-SEO, uzobe uthanda kakhuluukuheha ukunakwa kwamakhasimende angakhona.
Ukuqalisa nokuqhuba ibhulogi kudinga imizamo ejwayelekile yomuntu olungiselelwengomsebenzi onzima, ucwaningo futhi unesithakazelo sesihloko. Noma kunjalo, amasevisi we-ITizinkampani kufanele ziqaphele umphumela ongase ube nawo ongekho ebhizinisini.Amaklayenti Semalt i-Digital Agency afakazele ngempumelelo ukuthi ukubuyiselwa kokutshalwa kwezimali ekusebenzeni ibhulogi kuwufanele kakhulu.